Iza isika ary maninona no misafidy antsika - Hebei Fine Art Co., Ltd.
Iza moa isika ary nahoana no mifidy antsika
Vannova dia orinasa ara-barotra manerantany ho an'ny vokatra mpanjifa sy indostrialy. Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 2007. Nanolo-tena izahay hanome vokatra tsara sy serivisy mahafa-po ho an'ny mpanjifanay manerana izao tontolo izao miaraka amin'ny filozofia orinasa momba ny fahamendrehana, ny fanavaozana, ny firaisankina ary ny fanoloran-tena.
Manana tsipika sy fitaovana famokarana feno izahay mba hihaona amin'ny fahaiza-manaon'ny famokarana sy ny ekipa fanadihadiana matihanina, fanaraha-maso kalitao hentitra. Manolotra serivisy OEM sy ODM izahay ary afaka manampy anao hanamboatra ny labels manokana ny ekipanay. Ny ekipan'ny varotra dia hamaly sy hamaha ny olanao mandritra ny fametrahana ny cilia artifisialy ao anatin'ny 24 ora.
Manana fifanarahana amin'ny DHL, FEDEX, UPS, EMS, SF ary TNT izahay mba hanomezana fiarovana tsara kokoa amin'ny entana sy fitaterana, mba hahazoana antoka fa afaka mahazo ny eyelashes ianao.
Vonona ny handroso sy hivoatra miaraka amin'ny mpanjifanay izahay. Vonona ihany koa izahay hihazona fifandraisana maharitra sy maharitra amin'ny mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana mitohy ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy, mahazo fahatokisana bebe kokoa amin'ny mpanjifa, mahazo antoka kokoa ny mpanjifa hiara-miasa amintsika, mba hahatratrarana toe-javatra mandresy.
Manokan-tena foana izahay hanome ny mpanjifa ny vokatra tsara indrindra miompana amin'ny tsena, Amin'ny maha-mpivarotra sy mpanamboatra eyelashes matihanina amin'ny marika VANNOVA, Afaka manolotra vokatra isan-karazany izahay ahitana ny Strip kapoka, fanitarana eyelashes, cluster flare karavasy, volomaso fanitarana , kojakoja volomaso sy volomaso sns. Ny kalitao azo itokisana dia ny fanoloran-tenantsika tsy tapaka ho an'ny mpanjifa rehetra manerana izao tontolo izao. Miaraka amin'ny ezaka mitohy sy mifantoka amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy, ary koa ny fikarohana matihanina sy ny fanohanana ekipa fampandrosoana, dia mino izahay fa VANNOVA no ho safidinao tsara indrindra avy any Shina.
Manaiky ny baikon'ny OEM avy amin'ny mpanjifa ambongadiny na mpaninjara izahay izay manana endrika famolavolana vaovao sy lamaody amin'ny kapoka maso izay azo ampifanarahana amin'ny tsena samihafa eran'izao tontolo izao.
Tsy nitanisa ny vokatray rehetra izahay eto, raha mila famolavolana bebe kokoa miaraka amin'ny vidiny sy ny antsipiriany amin'ny antsipiriany, na manana fanontaniana momba ny vokatray, azafady mba mifandraisa aminay amin'ny mailaka na telefaona, Maniry mafy ny vokatray sy ny serivisy tsara indrindra izahay.
mba hahazoana fahafaham-po sy fankasitrahana ny mpanjifa.